तपाईंको स्वर्गीय अपार्टमेन्ट? - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > भविष्य > तपाईंको स्वर्गीय अपार्टमेन्ट?
के तपाई आफ्नो स्वर्गको अपार्टमेन्टको लागि पर्खदै हुनुहुन्छ?
आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघिल्लो रात येशू आफ्ना चेलाहरूसित संस्कार हलमा बस्नुभयो। तिनीहरू देखेर र सुनेका देखेर चेलाहरू चकित भए। येशूले तिनीहरूका खुट्टा धोइदिनुभयो, र तिनीहरूमा विश्वासघाती भएको घोषणा गर्नुभयो, र पत्रुसले उसलाई एक पटक मात्र होइन, तीन पटक धोका दिनेछ भनेर भने। उनीहरूले के जवाफ दिए होलान्? «यो मसीह हुन सक्दैन। ऊ कष्ट, विश्वासघात र मृत्युको कुरा गर्दछ। अनि हामीले सोच्यौं कि उनी एक नयाँ राज्यको प्रवर्तक थिए र हामी उहाँसँगै शासन गर्नेछौं! " भ्रम, निराशा, डर - भावनाहरू जुन हामी सबैसँग धेरै परिचित छौं। निराश अपेक्षाहरू। अनि येशूले यी सबैको प्रतिरोध गर्नुभयो: not चिन्ता नगर! मलाई विश्वास गर्नुहोस्! » उहाँ आउँदै गरेको डरलाग्दो अवस्थाको बाबजुद मानसिक रूपमा आफ्ना चेलाहरू निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ र जारी राख्नुहुन्छ: "मेरो बुवाको घरमा धेरै अपार्टमेन्टहरू छन्"।
दुर्भाग्यवस, धेरै मानिसहरूले स्वर्गमा कतै कतै स्वर्गबाट ​​एक्लो व्यक्तिले हामीलाई टाढाबाट हेरे जस्तो कल्पना गर्छन्। "मलाई" र "मा" "लाग्ने नगण्य लाग्ने शब्दहरूले ईश्वरीय अस्तित्वको एक बिल्कुलै भिन्न पक्ष प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो सहभागिता र घनिष्टताको बारेमा छ। यो अनुहार सम्बन्धको एक अनुहार हो। यो गहिरो र घनिष्ठ छ। तर आज तपाई र मसँग के गर्नु पर्छ? यस प्रश्नको उत्तर दिनु भन्दा पहिले म मन्दिरको छोटकरीमा समीक्षा गर्नेछु।
राम्रो घरसँग तपाइँ के विचारहरू संलघ्न गर्नुहुन्छ? हुनसक्छ: शान्ति, शान्त, आनन्द, सुरक्षा, निर्देशन, क्षमा, सावधानी, बिना शर्त प्रेम, स्वीकृति र आशा, केहि नामको लागि। यद्यपि, येशू हाम्रो लागि प्रायश्‍चितको निम्ति मृत्यु लिन मात्र पृथ्वीमा आउनुभएन, तर एउटा राम्रो घरसँग सम्बन्धित यी सबै धारणाहरू बाँड्न र उहाँ र उनका बुबाले बाँडनुभएको जीवनको अनुभव गर्न हामी पनि आउनुभयो। पवित्र आत्माले डो .्याउँछ।
के तपाईं अहिले गाह्रो, निराश, निराश स्थितिमा हुनुहुन्छ? आश्वासन दिनुहोस्: येशूका सान्त्वनाका शब्दहरू तपाईंलाई सम्बोधन गरिएको छ। जसरी उहाँ एक पटक आफ्ना चेलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रोत्साहित गर्न र बलियो बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँ तपाईंलाई पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ: worry चिन्ता नलिनुहोस्! मलाई विश्वास गर्नुहोस्! » तपाईंको चिन्ताले निराश नहुन दिनुहोस्, तर येशूमा भर पर्नुहोस् र उहाँ के भन्नुहुन्छ सोच्नुहोस् - र उसले के छोडिदिन्छ - उहाँ केवल यसो भन्नुहुन्न कि उनीहरू बहादुर हुनुपर्दछ र सबै कुरा ठीक हुन्छ। यो तपाईं खुशी र समृद्धि को चार चरण ग्यारेन्टी छैन। उसले प्रतिज्ञा गर्दैन कि उसले तपाईंलाई स्वर्गमा एउटा घर दिनेछ जुन तपाईं मरिसकेपछि मात्र लिन सक्नुहुनेछ - र त्यसैले यो तपाईंको सबै कष्टको लागि लायक छ। बरु, उहाँ यो स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि क्रूसको मृत्युले हाम्रा सबै पापहरू लिई उहाँसँगै क्रूसमा टाँगिनुभयो, जसले गर्दा हामीलाई परमेश्वर र उहाँको घरबाट अलग गर्न सक्ने सबै कुराको छुटकारा पाउन सकिन्छ।
तर त्यो सबै होइन। तपाईं भगवान्को त्रिएकको जीवनमा मायालु ढंगले सम्मिलित हुनुहुन्छ ताकि तपाईं पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको अनुहार साझा गर्न सक्नुहुनेछ - परमेश्वरको जीवनमा। ऊ तपाईं उसको हिस्सा बन्न चाहन्छ र सबै कुरा अब उहाँ खडा हुनुहुन्छ। ऊ भन्छ: "मैले तिमीलाई यस्तो बनाएको छु कि तिमी मेरो घरमा बस्न सक्नेछौ।"
सबैका पिता, हामी तपाईलाई धन्यबाद र धन्यवाद दिन्छौं, जो तपाईको छोरालाई भेट्न आए जब हामी तपाईबाट टाढा थियौं र हामीलाई घरमा ल्याए! मृत्यु र जीवनमा उनले हामीलाई तपाईंको प्रेमको घोषणा गरे, हामीलाई अनुग्रह दिए र हाम्रो महिमाका ढोका खोलिदिए। हामी ख्रीष्टको शरीरमा भाग लिनेहरू पनि उहाँको पुनरुत्थानको जीवन जिउन सकौं; हामी जो उहाँको कचौराबाट पिउँछौं त्यसले अरूको जीवन पूर्ण गर्दछ; हामीहरू जो पवित्र आत्माबाट ज्योति भएका छौं संसारका लागि ज्योति हौं। हामीलाई आशा दिनुहोस् कि तपाईंले हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, कि हामी र हाम्रा सबै बच्चाहरू स्वतन्त्र हुनेछौं र सारा पृथ्वीले तपाईंको नामको स्तुति गाउनेछ - हाम्रा प्रभु ख्रीष्टमार्फत। आमेन ]